ထိပ်တန်း 10 China Stage & Event & Rental LED Display ထုတ်လုပ်သူ
21-12-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ထိပ်တန်း 10 China Stage & Event & Rental LED Display ထုတ်လုပ်သူများ နိဒါန်း စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းသည် LED Display လိုအပ်ပါသည်။သင်သည် တစ်နေ့တာလုံး ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် LED display များကို အမြဲတွေ့ရပါမည်။အထူးသဖြင့် ကြော်ငြာနဲ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။
ဘုရားကျောင်းများ၊ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များအတွက် ပြင်ပ LED အီလက်ထရွန်းနစ် မျက်နှာပြင်
သင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန် စမတ်ကျပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေပါသလား။ယခုအခါ ကမ္ဘာကြီးသည် အလုပ်တိုင်းအတွက် နည်းပညာကို ဦးတည်သည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း ပိုများလာသည်။စျေးဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွင် နည်းပညာသည် အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ထို့အတူ လုပ်ငန်းတစ်ခု မြှင့်တင်ရာတွင်...
ဟိုတယ် LED ပြကွက်များ- ဟိုတယ် သို့မဟုတ် မိုတယ်အတွက် စိတ်ကြိုက် LED Display ဆိုင်းဘုတ်များ
သင့်ဟိုတယ် သို့မဟုတ် မိုတယ်လုပ်ငန်းအတွက် ဟိုတယ် LED Display ဆိုင်းဘုတ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စီစဉ်နေပါသလား။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာခြင်းများတွင် မည်မျှထိရောက်ပြီး အကျိုးရှိသော LED ဆိုင်းဘုတ်များ မည်မျှထိရောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိပါသည်။ဒါပေမယ့် ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဘေလ်ဘုတ်တွေအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့ နားလည်လာကြပါတယ်။
ထိပ်တန်း LED ဗီဒီယိုနံရံ ငှားရမ်းခြင်း USA ပေးသွင်းသူ 10 ဦး
ထိပ်တန်း LED ဗီဒီယို နံရံ အငှား 10 USA ပေးသွင်းသူများ နိဒါန်း LED ဖန်သားပြင်များ ငှားရမ်းခြင်းသည် လွယ်ကူသော ကိစ္စမဟုတ်ပါ။အထူးသဖြင့် သင် ပထမအကြိမ် ငှားထားရင် တော်တော်များများကို သင်သတိမထားမိဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။သို့သော်၊ ကောင်းမွန်သောငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်ဗီဒီယိုနံရံကို ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်...
LED ပိုစတာစခရင်နှင့် သာမန် LED စခရင်ကြား ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။
LED ပိုစတာစခရင်နှင့် သာမန် LED စခရင်ကြား ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။သင့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်သည့်အခါတွင်၊ LED မျက်နှာပြင်များသည် စျေးကွက်တွင် အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ဤစခရင်များသည် စျေးကွက်တွင် အမျိုးကွဲအမျိုးမျိုးရှိနေသည်။LED ပိုစတာစခရင်မှ adver အထိ...
Led Poster Display ရဲ့ Application တွေက ဘာတွေလဲ။
LED ပိုစတာ၏ စျေးကွက်ဝေစုသည် စီးပွားဖြစ်ပြသမှုဈေးကွက်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှစ၍ စျေးကွက်ဝေစု သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့သည်။ပိုစတာ LED သည် ကြော်ငြာနှင့် ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပုံမှန် သတင်းအချက်အလက် သယ်ဆောင်သူအဖြစ် ယနေ့ခေတ် အခြားသော သတင်းမီဒီယာ အမျိုးအစားများထက် ၎င်း၏ အထူးအားသာချက်များရှိသည်။ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်...
ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ပိုစတာဆိုတာ ဘာလဲ။
21-10-29 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ပိုစတာဆိုတာ ဘာလဲ။ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ပိုစတာ၏ နိဒါန်းအကျဉ်းကို ဤဒစ်ဂျစ်တယ် LED ပိုစတာဖြင့် ခေတ်မီသော အခြားနည်းဖြင့် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ ကြော်ငြာစာများကို ပြသပါ။ဤပြတ်သားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်သည် ဖြတ်သန်းသွားသောဖောက်သည်များနှင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းများကို ပြသနိုင်သည်...
Taxi ထိပ်တန်း LED မျက်နှာပြင်
21-10-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Taxi Top LED Display ဆိုတာ ဘာလဲ။Taxi သည် နေရာတိုင်းတွင်ရှိနေပြီး၊ Taxi သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ပို၍လိုအပ်လာပါသည်။လူအများသိကြသည့်အတိုင်း TAXI ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ကား၏ထိပ်ရှိ မီးပုံးသည် တက္ကစီ၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ကြော်ငြာတစ်ခုတင်လိုက်ခြင်းဖြင့် တက္ကစီကုမ္ပဏီသည် အပိုဝင်ငွေရှာနိုင်သည်...
အဆင့် LED စခရင်ကို ၀ ယ်ရန်လမ်းညွှန်
21-09-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
စင်မြင့် LED စခရင်ကို ဝယ်ယူရန် လမ်းညွှန် LED သည် အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒိတ်များအတွက် ကိုယ်စားပြုသည်၊ ၎င်းသည် ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ပုံတစ်ပုံကို ဖန်တီးရန်အတွက် LEDs အစုအဝေးကို အသုံးပြုသည့် ဖြောင့် panel display တစ်ခုဖြစ်သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်းတို့သည် မင်္ဂလာခန်းမများ၊ ဘုရားကျောင်းဆောင်သောဖန်သားပြင်များ၊ လက်ထပ်ပွဲလမ်းပြမျက်နှာပြင်များ၊ pu...
LED Video Wall နှင့် Church Stage Display
LED Video Wall နှင့် Church Stage Display သည် ခေတ်သစ်ဝတ်ပြုရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြင်အာရုံနည်းပညာသည် အသင်းတော်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အစွမ်းထက်ဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ယခု တစ်နေ့တွင် ဝတ်ပြုရာအိမ်အများအပြားသည် သတင်းစကား၊ သတင်းကိုးကွယ်မှုနှင့် အခြားအရာများကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဗီဒီယိုနံရံများဆီသို့ ကူးပြောင်းလာကြသည်။ဦးဆောင်ပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း စင်မြင့်ပေါ် လွှင့်တင်ခြင်း...
ပြပွဲများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဘူတာရုံများအတွက် အိတ်ဆောင် LED ပိုစတာဘုတ်၊
21-03-24 ရက်နေ့တွင် admin မှ
LED ပိုစတာ Display သည် တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုး၊ လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးမုဒ်များစွာ၊ တောက်ပမှုမြင့်မားသော၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး အလွန်ပါးလွှာသောကိုယ်ထည်နှင့် တောက်ပသောအလင်းရောင်ရှိသောနေရာများတွင်ပင် အရည်အသွေးမြင့်ပြသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေရန် အင်္ဂါရပ်များပါ၀င်ပါသည်။ဖောက်ပြန်တဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုပါ...
LED Display မျက်နှာပြင် အားသာချက်များ
အမြဲလိုလို၊ ပြပွဲတစ်ခုပြီးနောက်၊ ရာနှင့်ချီသော စိတ်ကူးသစ်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာဘုတ်များစျေးကွက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ဖောက်သည်အများအပြားနှင့် စကားပြောပြီး မီလန်ရှိ Viscom Italia တွင် ပြခန်းများစွာကို လည်ပတ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သိပြီးသားအရာတစ်ခုကို သိလိုက်သော်လည်း ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်အား ထိမိသွားသည်... The v...
Outdoor Led မျက်နှာပြင် Outdoor Led Display ၊ Led Display မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက် ဆိုင်းဘုတ် Led မျက်နှာပြင်